Poidełko Point Isi mmiri • Mma; • Poidełka • Isi iyi mmiri na-arinụ mmiri • Zdroje
Water Water dị ka naanị onye nnọchi anya Kama na Poland ka enyekwa onyinye mmanya, isi iyi mmiri mmiri ọ drinkingụ andụ na mmiri iyi ọ drinkingụ drinkingụ, maka ụlọ akwụkwọ na mahadum, ụlọ ọfịs, ebe a na-ere ihe, osisi na-emepụta ihe, ebe a na-ahụ maka egwuregwu, ebe egwuregwu, ọdụ ụgbọ elu, ọdụ ụgbọ mmiri, ebe a na-ahụ maka ahụ ike, ụlọ ezumike, ebe nkiri, sinima, ụlọ ọrụ steeti, ogige, egwuregwu, ebe egwuregwu, ebe a na-egwu egwu, wdg.
Download katalọgụ >>
Companieslọ ọrụ Elkay nọ n'isi ụlọ ọrụ Downers Grove, Illinois, nwere ụlọ ọrụ mmepụta ihe na United States, yana arụmọrụ mba ụwa na China na Mexico na-eje ahịa ụwa.
Emezila mmiri. Sachaa ya! Anyị na-ewetara ndị amamihe ikanam UV oriọna technology maka mmiri disinfection si Acuva. Anyị bụ ndị nkesa na-enweghị atụ na Europe!
Dual-nzube ọ bowlụ bowlụ nnukwu efere - LZS8WSS2K nlereanya
Ihe omuma a jikota ebe a na-agbanye mmiri, o bu mmiri iyi iji me ka akpiri kporo gi akpoo ma ghara ibu. Ọ bụ ezigbo usoro maka ụlọ akwụkwọ, mahadum, akụrụngwa ọha, gụnyere klọọkụị, ọfịs na ụlọ ọgwụ.
N'otu oge ahụ, ọ na-ewepụta nkà mmụta ihe ọkụkụ ọhụrụ site na ịgwa ndị ọrụ banyere oke karama plastic echekwara maka ụdị mmiri a.
Green aghụghọ - Egosiputa ọnụọgụ nke karama rọba a zoputara.
Ihe nlele eserese (ụdị na iyo naanị) - Green, odo, na-acha ọbara ọbara LEDs egosi nyo ndụ.
Mmiri iyi Laminar - Njuju ndozi ya - na-eme ka ọ dị mma ma dị ntakịrị spatter
mmiri, 4-6 l / min.
Mgbanwe spout - Flexi-Nche na-echebe megide onye ọrụ unan. O nwere ihe mkpuchi nke na-egbochi mmụba nke microorganisms.
Kọmputa ihe mmetụta uche - Mmekọrịta na-adịghị ọcha na ịdị ọcha na-akpaghị aka na-akpaghị aka mgbe sekọnd 20 nke arụghị ọrụ.
Zuru okè maka:
Schoolslọ akwụkwọ na kọleji
Facilitieslọ ọrụ ahụike
ọdụ ụgbọ elu
Ahụ ike na ndị ọzọ
Nlereanya LZS8WSS2K - Ejiri ngwaọrụ 60% emegharị, yana ọ dị mma maka ndị nwere nkwarụ, ụmụaka na ndị okenye nọ n'oche nkwagharị.
Ihe ngosi pụrụ iche nke nwere tema na-agwa onye ọrụ ya banyere ọnụọgụ karama ahụ a zọpụtara, si otú a kwekọọ na ọnọdụ dị ugbu a na gburugburu ebe obibi.
Enyere ya ihe ndozi di elu (ndu, chlorine, solids ọdịnaya na uto mara nma na nke isi) zuru oke maka ihe ruru mmiri puku iri na abuo na friji.
Mgbe e jiri ya mee ụlọ akwụkwọ, enwere ike ịkwado ya n'ụzọ pụrụ iche, nke nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma, nke na-echekwa ụmụaka megide mmerụ ahụ. Ihe nkesa na-ejuputa karama na-akpaghị aka site na ihe mmetụta.
* Ọ ga - ekwe omume ịme ụdị ngosipụta ọ bụla na efere aluminom.
Drinker - nlereanya EZS8S
Dịka ihe atụ a dị n’elu, akwadobere ya na friji, ihe ndozi dị elu (ndu, chlorine, ihe na-edozi ya na uto na ọ andụ ọma) zuru oke maka mmiri dị puku iri na abụọ.
Mgbe e jiri ya mee ụlọ akwụkwọ, enwere ike ịkwado ya n'ụzọ pụrụ iche, nke nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma, nke na-echekwa ụmụaka megide mmerụ ahụ.
Kwesịrị ekwesị maka ndị nwere nkwarụ, ụmụaka na ndị okenye nọ n'oche nkwagharị.
Mmanya - dozie LZSTL8WSS2K
Ihe abuo nwere uzo abuo mejuputara uzo a gosiputara n’elu ndi okenye na umuaka.
Onye na-ewepụta ihe maka iko mmiri na-ejuputa n’ọkụ na-eme ya.
Ebe a na-agbanye mgbidi karama
• Site na bọtịnụ
• Green Tricker counter
• A ga-ewepụ nhichapu mmiri ahụ na mmiri ya
mmiri mmiri ka fọdụrụ n’ime ngwa ọrụ
• a na-eji emeju: karama mmiri, karama, ite
• emebere maka nrụnye n'ebe siri ike
• Ihe ngosi Green Tricker kwadoro site na batrị 3 AAA
• dị mma maka ọfịs na ebe ọrụ
• ihe mmetụta na-enweghị kọntaktị
• ike zuru oke nke 4,5-6 l / min
• mmechi akpaghị aka mgbe sekọnd 20 nke arụghị ọrụ
Ndị na-a Meụ mmanya
Ihe ọụ Drinkụ ọ bowlụ nke ejiri igwe anaghị agba nchara. Thedị pụrụ iche nke nnukwu efere ahụ na-ebelata izere. Onye na - eme ihe na - eweghachi ihe dị egwu ma na - egbochi ihe ọ bụla ma ọ bụ na - agbagọ. Ndozi nke ugbo elu jet site na oghere pụrụ iche na bọtịnụ, na-enweghị ịpụpụ.
Ihe ọụ Drinkụ ejiri ọ steelụ mee nke igwe anaghị agba nchara. Thedị pụrụ iche nke nnukwu efere ahụ na-ebelata izere. Onye na - eme ihe na - eweghachi ihe dị egwu ma na - egbochi ihe ọ bụla ma ọ bụ na - agbagọ. Adgbanwe ịdị elu nke jet site na oghere pụrụ iche na bọtịnụ ahụ, na-enweghị ịghasasị. Onye na-a drinkụ ihe nwere ogwe mgbidi nchebe.
Drinker - ụdị na-eguzogide ọgwụ vandal
Otu usoro nke nwere ezigbo ihe owuwu nke ejiri akwa 2mm satin igwe anaghị agba nchara. Ejiri ihe eji eme ihe na-enweghị ndu, ọla na-adịgide adịgide nke emere ọla kọpa chrome.
Vandal na-eguzogide onwe ya, na-emechi onwe ya, bọtịnụ na-enweghị nchịkwa nwere oghere maka ịchịkwa ogo ụgbọ elu.
Ọ nwere ike iguzogide ibu kwụ ọtọ nke 250 n'arọ. Nkwenye maka ndị nwere nkwarụ. Zuru okè maka ụlọ akwụkwọ, ebe ịzụ ahịa, nlekọta na ụlọ ọrụ agụmakwụkwọ.
Vandal-proof Integrated mmiri kalama ndochi ọdụ na a karama mmiri. A na-enweta ya na nzacha na nju oyi.
Kọmputa Green Tricker ọhụrụ na-egosi etu karama plastik na-adịghị emebi emebi ma na-echebe gburugburu.
Otu usoro nke nwere ezigbo ihe owuwu nke ejiri akwa 2mm satin igwe anaghị agba nchara.
Ejiri ihe eji eme ihe na-enweghị ndu, ọla na-adịgide adịgide nke emere ọla kọpa chrome. Vandal na-eguzogide onwe ya, na-emechi onwe ya, bọtịnụ na-enweghị nchịkwa nwere oghere maka ịchịkwa ogo ụgbọ elu.
Onye ọ®ụ®ụ Swirlflo® - Moderndị ọgbara ọhụrụ
Ihe kachasị dị na usoro, ụdị ihe ọ drinkụ drinkụ sitere na usoro SWIRFLO, nke igwe anaghị agba nchara, nwere ogwe mgbidi na nnukwu bọtịnụ mbugharị mmiri.
Nkwenye maka ndị nwere nkwarụ. A raara nye ebe a na-ahụ maka ahụike, ọdụ ụgbọ elu, ọdụ ụgbọelu na ụlọ ọrụ ọha na ọhaneze na ọfịs.
Igwe mmiri mmiri mmiri ejikọtara ọnụ na onye ọ aụ SWụ SWIRFLO ọgbara ọhụrụ nke igwe anaghị agba nchara, nwere ihe ndozi, na-enweghị nju oyi, ya na ogwe mgbidi na nnukwu bọtịnụ mbugharị mmiri.
Kọmputa Green Tricker ọhụrụ na-egosi etu karama plastik na-adịghị emebi emebi ma na-echebe gburugburu. Nkwenye maka ndị nwere nkwarụ.
A raara nye ebe a na-ahụ maka ahụike, ọdụ ụgbọ elu, ọdụ ụgbọelu na ụlọ ọrụ ọha na ọhaneze na ọfịs.
Nrụ dị nro®ụ mmanya - ụdị ọgbara ọhụrụ
Otu okpukpu abụọ nke ndị na-a drinụ ihe ọ childrenụ forụ maka ụmụaka na ndị okenye, nke a na-eji igwe anaghị agba nchara, nwere ogwe mgbidi nke nwere ọdịdị mara mma na ụdị ọgbara ọhụrụ.
Nkwenye maka ndị nwere nkwarụ. Zuru okè maka ụlọ ọrụ ọha, ọdụ ụgbọ elu na ọdụ ụgbọelu.
Onye na-a drinkụ ihe eji akwa igwe anaghị agba nchara, yana ihe ndozi na ngwa nju oyi, ya na ogwe mgbidi na-enwe ọmarịcha ụdị na ụdị ọgbara ọhụrụ.
Agbara mmiri na isi iyi mmiri - n'èzí
Ebe a na-ejupụta mmiri n’ite mmiri na ndị na-a drinụ mmanya - ENDURA
Ebe a na-agbanye mmiri na mgbidi mmiri, vandal-proof, nwere usoro na-adịgide adịgide, nke a na-eji nchara emegharị ya, nke nwere mmara 4,5 mm.
Ntụ ntụ ntụ, na-eguzogide ihu igwe. Mfe ihu bọtịnụ dị mfe nwere valve na-emechi onwe ya.
Mkpụrụ mmiri nwere mmiri na-ebelata mmiri na-etisa site na ike nke 4,5-6 l / min. Zuru okè maka mpaghara ntụrụndụ.
Akwụkwọ a bụ akwụkwọ maka ndị nwere nkwarụ. Ọ dị na ụdị ntu oyi na - eguzogide - a na-akwụkwa valvụ ahụ ọzọ.
Ebe a na-ahụ maka karama mmiri na onye na-a drinkụ ihe ọ bowlụ andụ na nnukwu efere maka nkịta, vandal-proof, nwere ihe owuwu na-adịgide adịgide, nke a na-eji ọla nchara, okpukpu 4,5 mm.
Onye na - auterụ ihe ọ drinkụ drinkụ - ngwakọta eke
Afere ọ drinkingụ madeụ nke ejiri nchịkọta sitere n'okike siri ike - vibro ihe. Nnọọ ike na ihu igwe. Ihe ndi ozo bu ezigbo igwe anaghị agba nchara. Vutal na-eguzogide ọgwụ. Ezubere maka ndị nwere nkwarụ. A na - enweta ya na ụdị ntu oyi na - eguzogide - a na - akwụkwa valvụ ahụ ọzọ.
Onye na - aụ mmanya ejiri mee ihe nchịkọta sitere n'okike siri ike - vibro ihe. Nnọọ ike na ihu igwe. Ihe ndi ozo bu ezigbo igwe anaghị agba nchara. Vutal na-eguzogide ọgwụ. A na - enweta ya na ụdị ntu oyi na - eguzogide - a na - akwụkwa valvụ ahụ ọzọ.
mmiri dị ọchammiri efuisi iyimmiri iyiisi obodoUgboropitnikiolulu mmirindị na-akersụ mmanyandị na-a drinụ mmanyandị na-a elụ elkayironco na-a .ụ mmanyandị na-akersụ mmanyandị na-a internalụ mmanyandị na-a drinụ mmanyammanyaonye na-a schoolụ mmanya n’ụlọ akwụkwọsi na mgbatammiri maka ụlọ akwụkwọkpoo mmirimmiri ọ spụ spụmmiriisi iyi nke mmiri ọ drinkingụ .ụmmirimmiri ọ drinkingụ springụ